Ndezvipi zvinhu zvinoshandiswa nechero rekucheka uswa? Zhengchida Nereza Factory achaita nyanzvi kuongorora isu. Icho chishandiso chinhu ndicho chakakosha chinhu chinogadza kucheka mashandiro echishandiso, icho chine simba rakakura mukugadzirisa kushanda, kugadzirisa mhando, kugadzirisa mutengo ...
Hunhu hwemashizha ekucheka uswa ibasa rakapetana, mashandiro ari nyore, uye kugona kwakasimba kwekucheka kwezvinhu zvinoda kutemwa, kunyanya huswa, uye zvinokodzera masango ane gohwo repamusoro uye mapaki makuru. Mucheki wemucheka anotema huswa nehukama hwekucheka kufamba ...
Imwe yekucheka lawn blade inoshandisa iwe hauzive
Isu tinoziva kuti kune akawanda maumbirwo emashizha ekucheka uswa, saka zvinova zvakaoma kwazvo kwatiri kusarudza. Nzira yekusarudza mashizha ekucheka uswa? Nzira yekugadzirisa sei reza remuchina? Uye mashandisiro uye nekuchengetedza lawn mower blade? Mupepeti anotevera anounza kwauri. Maitiro ekugadzirisa banga re la ...
Boka rekutengesa raZhengchida rakapinda 22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Exhibition panguva yaGunyana 16-18th, 2020. Mhemberero yekuvhura yaive chiitiko chakanakisa. Nekuda kweye convid-19, ino ndiyo yekutanga uye chete kuratidzira kuti isu ...
Otomatiki Mechanical Arms Shanduko yeNzira
Pasina nguva refu yapfuura, Zhengchida yanga iine dzimwe nhengo nyowani mumusangano, dzakaunza nekugona kwepamusoro uye mhando iri nani kune zvigadzirwa. Iwo ndiwo otomatiki eMechanical Arms. Iyo otomatiki michini yekuvandudza chirongwa chakatangwa mukutanga kwa2019.Chikwata chemainjiniya ane ruzivo chakamiswa se ...
Mhando dzeLawn Mower Blades: Mashizha emashizha anowanzoshandisa marudzi maviri emashizha. Kazhinji kazhinji, mower anoshandisa blade yekucheka. Iri jasi rinocheka huswa uye rinoriburitsa kuburikidza neketi kunze kwedivi remuchina. Inoshandiswa zvakare ndeye mulching blade. Izvi zvakagadzirirwa kucheka huswa kakawanda uye kushandura huswa ...